CR7 dia hanokatra hotely vaovao any Marrakech, Madrid ary New York | Vaovao momba ny dia
Maria | | zavatra ilaina, About us
Raha misy fanatanjahantena miakatra amin'ny sokajy fisehoan-javatra manerantany miaraka amin'ireo mpankafy an-tapitrisany manerana an'izao tontolo izao dia soccer. Ny klioba sy ny mpilalao baolina kitra dia manaitra ny filana ka tsy mahagaga raha nosokafana ireo hotely misy lohahevitra natokana ho an'ny mpanjakan'ny fanatanjahantena.
Eny, nandritra ny fotoana kelikely dia iray amin'ireo kintana amin'ny baolina kitra eropeana, Cristiano Ronaldo, niditra tamin'ity fironana ity ary nanokatra trano fandraisam-bahiny marobe manana fanatanjahan-tena, fiainana salama ary ny endriny manokana ho lohahevitra lehibe.
Lisbon, Funchal, Madrid, New York ary ankehitriny Marrakech dia miditra amin'ny lisitry ny tanàna izay noforonin'ny hotely CR7. Manao ahoana ny tsirairay amin'izy ireo?
6 Manao ahoana ny hotely CR7?
Efa an-dàlam-pananganana ny fananganana trano fandraisam-bahiny fahadimy an'i Cristiano Ronaldo ary ny fitokanana azy dia voalahatra ho an'ny 2019 amin'ny anaran'ny Pestana CR7 Marrakech. Mety hanaraka ny andalana mitovy amin'ny hotely sisa izy fa miaraka amin'ny fomban'ny fomba marokanina, satria efa fantatra ny fitiavana ananan'ny mpilalao baolina kitra amin'ny firenena afrikanina.
Pestana CR7 Marrakech dia ho hita eny amin'ny arabe M an'ny tanàna, amin'ny iray amin'ireo faritra tsy manam-paharoa voahodidin'ny galeriana kanto, magazay lafo vidy, trano fisakafoanana misy firehana ary zaridaina mahafinaritra.
Ny trano fandraisam-bahiny izay ao an-tsain'ilay mpilalao baolina kitra ho an'i Madrid dia mety hanokatra varavarana amin'ity taona ity ary hapetraka ao amin'ny Plaza Ben'ny tanàna. Ny vidiny antonony dia manodidina ny 200 euro isan'alina ary hanana efitrano 87 izy, ary 12 ny ho suite.
Ho fahalianana, ny hevitra dia ny hisokafan'ny trano fandraisam-bahiny CR7 voalohany any Madrid, saingy noho ny fahasahiranana an-tanàn-dehibe sy ny fanemorana birao, dia voatery nahemotra ny fanokafana ny fananganana ny renivohitra Espaniola.
Ny Pestana CR2018 New York sy ny Pestana NY East Side ary ny Pestana Newark dia kasaina hisokatra any Etazonia amin'ny taona 7., izay hanampy efitrano vaovao maherin'ny 380 ao amin'ny firenena.
Na ireo any Etazonia na i Madrid dia samy hôtely amin'ny marika marika Collection, natokana ho an'ny mpijery manokana miaraka amina fomba ankehitriny sy an-tanàn-dehibe kokoa.
Miaraka amin'ny Pestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels sy tetikasa fandraisam-bahiny hafa dia tianay ny hamerina ny Baixa amin'ny fahalotoany ary hateraka indray.
Hotely fivarotana lehibe misy efitrano 80 sy suite deluxe eo afovoan-tanàna izy io, metatra vitsivitsy miala ny marika Praça do Comércio. Ny fanaingoana ny efitrano dia mandeha ary minimalist fa ny firesahana ny fanatanjahan-tena dia mitohy. Tsy amin'ny alàlan'ny endrik'i Cristiano Ronaldo eny rehetra eny fa amin'ny alàlan'ny fisian'ireo afisy fahitalavitra ihany koa Tompondaka amin'ny fandraisana hotely, baolina kitra latabatra ao amin'ny lobby na efijery goavambe ao amin'ny fisotroana sao diso lalao ianao.
Ankoatr'izay, ny Pestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels dia manana rafitra automatique an-trano ahafahanao mifehy ny jiro na ny maripanan'ny efitrano amin'ny fitaovana nomerika rehetra, misafidy mozika na manova fandaharana amin'ny fahitalavitra.
Ary ao amin'ny trano fandraisam-bahiny mampiroborobo ny fiainana salama, tsy azonao atao ny tsy mahita gym iray izay azon'ny mpanjifa ampiasaina sy manatsara ny toe-batany. misaotra ny fiheverana manokana natolotry ny hôtely miaraka amina programa fanazaran-tena mety ho an'ny olona tsirairay.
Ny anarany dia Pestana CR7 Funchal ary izy dia miorina ao an-drenivohitr'i Madeira amin'ny trano mena midorehitra manatrika ny ranomasina izay misy dobo filomanosana, spa, fidirana malalaka mankany amin'ny tranom-bakoka CR7 ao Funchal ary ny fahafaha-mampiasa fandaharana fanofanana manokana amin'ny gym any ivelany noforonin'ny mpilalao baolina kitra ihany.
Ao anatin'ny Pestana CR7 Funchal dia misy sokajy efitrano telo izay mampifangaro endrika amam-bika ankehitriny sy fanatanjahantena. Manana ny karazana fampiononana rehetra izy ireo, tsy misy rindrina ary azo alaina amin'ny alàlan'ny nomerika amin'ny alàlan'ny lalantsara ahitra izay mampatsiahy ny kianja filalaovam-baolina. Isaky ny varavarana dia misy sarin'i Ronaldo goavambe ary ao amin'ny efitrano fatorianao dia misy ny sarin'ny fiainany.
Ankoatr'izay, ny mpanjifa koa dia mahazo fidirana amin'ny terrasta eo an-tampon'ny hotely, izay manome fahitana mahatalanjona an'i Funchal, ny bay ary ny marina.
Manao ahoana ny hotely CR7?
Ny trano fandraisam-bahiny CR7 dia vokatry ny fifanarahana teo amin'ny kintana Portiogey sy ny Pestana Hotels & Resorts Group, izay tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny asa. Ny mombamomba ny mpanjifa amin'ny hotely Cristiano Ronaldo dia tanora eo anelanelan'ny 18 sy 35 taona liana amin'ny haitao, fiainana ara-pahasalamana ary fiainana ara-tsosialy.
Ny vidiny dia eo anelanelan'ny 250 sy 1.250 euro isan'alina arakaraka ny efitrano. Mety ho toa vidin-javatra mihoapampana izy ireo, saingy ireo dia trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 ahitana fitaovana fampiononana sy teknolojia farany indrindra. Na izany aza, misy ireo izay misalasala fa misy tanora maro izay mahazaka izany vidiny izany rehefa mirona hisafidy bebe kokoa amin'ny fizahan-tany mora vidy izy ireo.
Saingy, mikasa ny hampiakatra avo roa heny ny hotely ao anatin'ny dimy taona ny marika. Ny fisokafana manaraka dia heno fa any Milan sy Ibiza ary koa Azia sy Moyen Orient satria be mpitia i Cristiano Ronaldo ao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » zavatra ilaina » CR7 dia hisokatra hotely vaovao any Marrakech, Madrid ary New York